Turkish Cargo dia mandefa sidina avy any Istanbul mankany Johannesburg sy Madagascar
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Turkish Cargo dia mandefa sidina avy any Istanbul mankany Johannesburg sy Madagascar
Cargo Tiorka, manome serivisy ho an'ny firenena 120 eto amin'izao tontolo izao noho ny tambajotram-pitaterana be dia be, mandefa ny sidina entiny mankany Johannesburg, ivon-toerana indostrialy sy ara-barotra lehibe indrindra any Afrika Atsimo, ary Madagascar, nosy lehibe indrindra amin'ireo Nosy Vanilla, ny 1 Jolayst, 2017.
Antsipiriany momba ny fandaharam-potoana ho an'ny Istanbul (IST) -Johannesburg (JNB) –Madagascar (TNR) -Istanbul
Isan'ny sidina Date Route Departure Arrival Day Aircraft Type
6506 1.07.2017 IST JNB 13: 45 22: 25 Asabotsy A330F
6506 1.07.2017 JNB TNR 00: 25 04: 25 Asabotsy ​
6506 2.07.2017 TNR IST 06: 25 15: 25 Alahady ​
Amin'ny ankamaroan'ny fanondranana azy natao tany amin'ireo firenena eropeana sy amerikanina, i Afrika atsimo dia manondrana vokatra maro karazana manerana izao tontolo izao. Ireo vokatra aondran'i Afrika Atsimo amin'ny ankapobeny dia misy milina, fitaovana elektrika - elektronika, akora simika ary kojakoja fiara, ary ny vokatra toy izany dia aondran'ny entam-barotra amin'ny alàlan'ny rivotra ary entin'ny sidina mpandeha izay tantanan'ny Turkish Airlines.
Any amin'ny morontsiraka atsinanan'ny kaontinanta afrikanina, i Madagascar no lohalaharana amin'ny tsena manondrana entana marobe. Ny voankazo lavanila, voankazo tropikaly ary vokatra vita amin'ny lamba dia entina mankany amin'ny firenena eropeana sy amerikanina ary ny foza velona sy ny vokatra an-dranomasina kosa dia entina mankany amin'ny Farany Atsinanana miala an'i Madagasikara.
Ireo sidina enta-mavesatra, hotombanan'ny kargo Tiorka amin'ny toeran-kaleha roa, dia ahafahana miova amin'ny lafiny vokatra isan-karazany.
Ny karatra Tiorka, manome ny mpanjifany fifandraisana tsara indrindra amin'ny foibe famokarana sy varotra lehibe eto amin'izao tontolo izao, dia miezaka ny hanana fotoana manintona amin'ny serivisy manara-penitra avo lenta mba hanomezana fahafaham-po ny filan'ny mpanjifa any amin'ny faritra ary hampanakaiky kokoa an'izao tontolo izao.
Cebu Pacific manomboka sidina hariva mankany sy avy any Caticlan fantatra amin'ny anarana hoe Borocay
Niakatra indray i Hawaii hiatrika ny fanamby amin'ny “maha-akaiky” ireo fepetra vaovao momba ny fandraràna ny dia an'i Trump